ဒီဇင်ဘာလ 2014 |4၏စာမျက်နှာ 13 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 » ဒီဇင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 4)
Accedo Roku ပစ္စည်းများမှက Sky အားဖြင့်က Sky အွန်လိုင်းနှင့် Snap ဆောင်တတ်၏
စတော့ဟုမ်းနှင့်Unterföhring, 19th ဒီဇင်ဘာလ 2014 - Accedo, တီဗီလျှောက်လွှာဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်အတူတကွက Sky Deutschland နှင့်အတူ၎င်း၏အသစ်သောက Sky အွန်လိုင်းတီဗီ Box ကိုများအတွက်က Sky အွန်လိုင်းနှင့် Snap applications များဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ အဆိုပါ box ကိုအမေရိကန်အတွက်ပါတဲ့လူသုံးအများဆုံး streaming များမီဒီယာပလေယာကဦးဆောင်အမေရိကန် streaming ကုမ္ပဏီ, Roku နှင့် တွဲဖက်. တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ...
RX4အသံပြုပြင်ရေးနှင့်အတူအသက်အလယျပိုငျးကမ္ဘာမြေ၏အသံဆောင်ခဲ့
iZotope, Inc, တစ်ဦးဦးဆောင်အသံနည်းပညာကုမ္ပဏီ, Ray Beentjes, လက်စွပ်နှင့် The Hobbit Trilogy ၏သခင်ဘုရားအဘို့အတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအယ်ဒီတာ, အပေါ်က 'သရုပ်ဆောင်များကိုပိုဖမ်းဆီးဖို့ iZotope ရဲ့ RX4အသံပြုပြင်နှင့်တိုးမြှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများကျယ်ပြန့်အသုံးပြုမှုကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီကြောင်းထင်ရှား -set တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး-ရရှိလာတဲ့ပိုပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျော်ဖြေပွဲနှင့်ပိုပြီးသက်ရောက်မှုဇာတ်လမ်းပြောပြပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ Beentjes ၏သခင်ဘုရားအပေါ်လုပ်ဆောင်နေစတင် ...
ခရီးသွားသော Chapel Streams မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားများအတွက် Wirecast နဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ပါ
ဘုရားကျောင်းရဲ့တိုက်ရိုက် streaming ဝန်ဆောင်မှု, သူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာများမှအတရားစွဲဆိုမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်အဝေးမှ-တည်ရှိသောမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုခွင့်ပြုဆဲလ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet များTelestream®, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေး, ယနေ့ခရီးသွားသော Chapel မှ Telestream ရဲ့အတွက် Wirecast သုံးပြီးကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် သေးစိတျအပိုငျးဖြစ်သွားလာမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနိုင်ခြင်းခွင့်ပြုခြင်း, စမ်းချောင်းမင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားများနထေိုငျ ...
ပတေရုသပန် Live! DPA မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အတူတက်လေ့
ကုမ္ပဏီဃအတူအား NBC ထုတ်လုပ်မှု၏တစ်ခုလုံးကိုသွန်း outfits: screet ™ 4061 အသေးစား MICS နယူးယောက်, ဒီဇင်ဘာ 18, 2014 - ပတေရုသပန်တိုက်ရိုက် !, အဆိုပါဂန္ Broadway မှဂီတ၏အား NBC ရဲ့တိုက်ရိုက် primetime ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်မှု, Firehouse Productions ကနေအသံထောက်ခံမှုနှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် DPA မိုက်ခရိုဖုန်း။ ၏အသံ၏ကွန်ယက်ရဲ့ 2013 ပုံဖော်တင်ဆက်၏အောင်မြင်မှုကိုနောက်တော်သို့လိုက်ရာအဆိုပါတိုက်ရိုက်တီဗီ '' ရုပ်ရှင်, ' ...
MPSE အလုပ်ရှာဖွေရေးအောင်မြင်မှုကိုချီးမြှင့်လက်ခံမှအသံ Editor ကို Skip Lievsay ကြီးကြပ်
ဖေဖော်ဝါရီလ 2015th စတူဒီယိုစီးတီး, ကယ်လီဖိုးနီးယားဘို့စီစဉ်ထား 15 MPSE ရွှေ Reel ဆုပေးပွဲ - ဒီဇင်ဘာလ 18, 2014 - အ Motion Picture အသံအယ်ဒီတာများ (MPSE) ယနေ့ကြောင့်အကယ်ဒမီအသံ Editor ကိုနှင့်၎င်း၏ 2015 နှင့်အတူ Re-မှတ်တမ်းတင်ရောနှော Skip Lievsay ကြီးကြပ်ဆုကို-အနိုင်ရချီးမြှောက်မည်ကြေငြာခဲ့သည် MPSE အလုပ်ရှာဖွေရေးအောင်မြင်မှုကိုချီးမြှင့်။ မိမိအလုပ်ရောစပ်အကောင်းဆုံးအသံများအတွက် 2014 အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရခဲ့သူကို Lievsay ...
Sonnet ရဲ့ Fusion R400 RAID, USB 3.0 Rackmount သိုလှောင်မှုစနစ် Built-in RAID5Controller, USB မှတ် 3.0 Interface ကိုကမ်းလှမ်း
low-ကုန်ကျစရိတ်, လေး-ဂလားပင်လယ်အော် 1U သိုလှောင်မှုစနစ်, 3.5 လက်မ SATA မောင်းအသုံးပြုဘက်စုံနှင့် RAID5Irvine, ကာလီဖိုးနီးယားအတူ Configure လုပ်နည်းလွယ်ကူ Is - ။ ဒီဇင်ဘာ 17, 2014 - Sonnet Technologies ကယနေ့ Fusion (TM) R400 RAID, USB မိတ်ဆက် 3.0 တစ်ဦးကို USB5interface ကိုအတူတစ်လေးပင်လယ်အော်, ဟာ့ဒ်ဝဲ RAID 3.0, rackmount သိုလှောင်မှုစနစ်။ the Fusion R400 RAID, USB 3.0 များအတွက် high-performance ကို RAID controller ကိုပေါင်းစပ်ပြီး ...
"ဒီတစ်ရာ-Foot ခရီး", "တောထဲသို့," "နောဧ" နှင့် "စစ်မှန်သောစုံထောက်" Post-ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများအတွက်စက်ရုံရှေးခယျြထားသောအမည်စာရင်းတင်သွင်းသူတို့တွင်ဖြစ်ကြသည်။ NEW YORK- Technicolor-PostWorks နယူးယောက်ငါးရွေ့လျားမှုပုံနဲ့ 2015 ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုပေးပွဲများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းလေးရုပ်မြင်သံကြားရှိုးမှ Post-ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများပေးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါပြပွဲ 18 လျာထားခံရစုစုပေါင်းတက်ဖရိုဖရဲ။ ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုရမှာဇန်နဝါရီလ 11th ထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မည် ...
2015 HPA Tech မှသီးသန့် (r) ကို Power-ထုပ်ပိုးဇယားကြေညာ
ဉီးနည်းပညာ Event စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များခေါင်းဆောင်များ (Los Angeles မြို့,, CA) ကဟောလိဝုဒ် Post ကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ (r) (HPA) ၏အားလုံး-စတား lineup အဆိုပါ 2015 HPA Tech မှသီးသန့် (r) အတွက်အချိန်ဇယားကိုထုတ်ဖော်ပြသထားပါတယ် Features ။ တစ်ဦးကသူကိုအင်ဂျင်နီယာ, နည်းပညာ, တီထွင်ဖန်တီးမှု၏သူကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်ဦးခေါင်း-အပေါ်ပစ္စုပ္ပန်၏နှိပ်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်စဉ်မဟာဗျူဟာမြောက်စီးပွားရေး, အနာဂတ်ကာလ၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်နည်းပညာများကိုဆွေးနွေးပါရန်တော၌စုဝေးစေမည်။ ...